တရုပ် တွေဗုးံခွဲနေတာ ဆိုရင် အစိုးရ က မသိပဲနေမလား? | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မွတ်စလင်မ်ဆိုတာ မိမိရဲ့ နှုတ်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ လက်ကြောင့်ဖြစ်စေ အခြားမွတ်စလင်မ်တစ်ဦးအား ဒုက္ခမရောက်စေသူ
နိုင်ငံရေး လူမျိုး/ဘာသာရေး သွေးထိုးလှုံ့ဆော် ၀ါဒဖြန့် နေသော pages တွေဟာ နေပြည်တော် စစ်ရုံးချုပ်မှ ချုပ်ကိုင်ခိုင်းစေနေကြောင်း »
တရုပ် တွေဗုးံခွဲနေတာ ဆိုရင် အစိုးရ က မသိပဲနေမလား?
Solonight Emparor‘s status.
ထင်ယောင်ထင်မှား ဝိုးတဝါး ခန့် မှန်းချက်များ
ကျနော့် ဟာကျနော် ခန့် မှန်းကြည့် တာပါ။ ဘာ မှမသေချာပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ရင်းနှီး မြှပ်ုနှံ မှုတွေ ဝင်မလာရင်အကျိုး အရှိဆုးံ ဖြစ်မဲ့ သူတွေက တရုပ် နဲ့ မြန်မာခရိုနီ တွေပါ။ဒါကြောင့် shwe pa yit ရေးတဲ့ ပို့ စ်မှာ တွေ့ မိပါတယ်။ဗုးံတွေကွဲရင်ဘယ်သူတွေ အကျိုးအရှိဆုးံ ဖြစ်မလဲ ,? ဆိုတဲ့မေးခွန်း။
Eleven media ကလည်း သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ မှာ ဗုးံ ကွဲမှု နောက်ကွယ်မှာ တရုပ် ပါဝင်ပတ်သက်တယ် ဆိုတဲ့ အထောက်အထား ရှိတယ် ဆိုတော့ ။ 90% တရုပ် နဲ့ ခရိုနီ လက်ဝါးရိုက် တဲ့ အကွက် ဆိုတာ သေချာနေပါတယ်။သေသွားသူ တွေ ကတော့ တရုပ် နဲ့ ခရိုနီ ကောင်းစားဖို့အသက်ပေးသွားရတဲ့ အာဇာနည်တွေပေါ့။ ရင်နာတယ်။ [Or…may be EMG and 969 Bamas just pointed finger to China to save RAKHINE CRIMINALS responsible for bombing?]
ဒါဆိုရင် တရုပ် တွေဗုးံခွဲနေတာအစိုးရ က မသိပဲနေမလား။သိတာပေါ့။
ဒီကိစ္စ တွေ ကြောင့် မင်းအောင်လှိုင် ဟာ တရုပ်ပြည် သွားရပြီး တရုပ်သမ္မတ က မင်းအောင်လှိုင် ကို အိတ်ကပ် ထဲထည့် ဖို့ အရေးတယူ ဆက်ဆံလိုက်တာပါ။ဒါဆိုရင် ကာချုပ် ကို ပိုင်ရင် ကျန်တဲ့ ကောင်တွေ သောက်ဂရုစိုက်စရာ မလိုဘူ ဆိုတာ ရှင်းနေလို့ပေါ့။ဒါဆို ကာချုပ် က မြန်မာ နိုင်ငံမှာ အာဏာအရှိဆုးံ လူ ဆိုတာ 90 % ပါပဲ။ မင်းအောင်လှိုင် သာ တရုပ် အလိုကျ ကတဲ့ ရုပ်သေး ရုပ် ဖြစ်လာရင် အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ ။နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်မှု တွေ။ဥပဒေမဲ့မှုတွေ ဖြစ်လာဖွယ် ရှိပါတယ်။ ကဲ ဒီလိုများ ဖြစ်လာရင် အံတု မှာလား ငြိမ်နေကြအုးံ မှာလား။
ခုတိုင်းဆိုရင် တရုပ်က မြန်မာကို ချယ်လှယ် မှုဟာ ထင်ထားတာထက်များစွာ ပိုမို နက်ရှိုင်း နေပါတယ်။
သူများနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး တွင်သာမက စီးပွားရေး လူမှုရေး တွေကိုပါ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း စွတ်ဖက်ခြယ်လှယ်တဲ့ အဆင့်ပါ။
မြန်မာဟာ တရုပ် ရဲ့ ကျွန် စစ်စစ် ဖြစ်နေပါပြီ။အဲဒါ မြန်မာ စစ်အစိုးရတွေ ကြောင့်ပါ။
နောက်တခု က တရုပ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ လုံခြုံရေး ကို တရားဝင် အကာအကွယ်ပေးမယ်လို့ကတိပြုထားပုံပေါ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံ နဲ့ တခြား နိုင်ငံ တွေ စစ်ဖြစ်ပွား ရင် ဝင်ရောက်ကူညီမယ် လို့ ကတိပေးထားပုံပါပဲ။
ဒါကြောင့် သိန်းစိန် အစိုးရဟာ လုပ်ချင်ရာတွေ လုပ်နေပြီး ကမ္ဘာကို မထီမဲ့မြင်လုပ် ချင်နေတာပါ။
တရုပ် ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ကို ဒုတိယ မြောက်ကိုးရီးယား အဖြစ် ပုံဖေါ် ဖန်တီး နေတာပါ။
အခုလည်း မြန်မာဟာ မြောက်ကိုးရီးယား လိုပဲ တရုပ် သည်သာ အမိ ။တရုပ်သည်သာ အဖ ။ဖြစ်နေပါပြီ။ မြောက် နဲ့ မတိမ်းမယိမ်း ဆင်းရဲစုတ်ပြတ်နေပါပြီ။
မြန်မာအစိုးရတွေဟာ သူတို့ အာဏာတည်မြဲ ဖို့ အတွက် အဖေ မခေါ်သင့် သူကိုအဖေခေါ် ခဲ့တဲ့ အကျိုးဆက်ပါ။မနက်ဖြန်တွေဟာ ထိတ်လန့် စရာနေ့ ရက်တွေ အဖြစ်ရှိနေအုးံမှာ သေချာနေပါတယ်။ပြည်သူတွေကသာလျှင်ဒီကိစ္စ တွေက ရုန်းထွက်ဖို့အနစ်နာခံလုးံပမ်း ရပါမယ်။
This entry was posted on October 19, 2013 at 1:54 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.